I-Illinois Adult ukusetshenziswa kwe-cannabis - Ukusebenza ngokusemthethweni kweMarijuana e-Illinois
I-Illinois Adult Use Cannabis iyeza ngoJanuwari 1, 2020, uma umthetho ufakwa amaDemocrats futhi wesekwa uMbusi. Kuchazwe umthetho wensangu osemthethweni
Ufuna Ukufaka Isicelo Selayisense Yokutshala Yeklasi 1?
Ukusetshenziswa kwabadala kwe-Illinois komthetho weCannabis
Lesi Isifinyezo Sokusetshenziswa Kwabantu Abadala esivela ku-JB Pritzker kusuka ngoMeyi, 2019. Okube ngumthetho ohlukile.
Uma ufuna i Ilayisense yokuhlinzeka nge-Illinois - chofoza lapha.
Uma ufuna a I-craft grow licence e-Illinois - chofoza lapha
I-Illinois Izoyisebenzisa Kanjani Isikhathi Esemthethweni I-Marijuana Futhi kanjani?
Ukuqala ngoJanuwari 1, 2020, abantu abadala abangaphezulu kweminyaka engama-21 bazokwazi ukuthenga ngokomthetho insangube yokuzijabulisa ezindaweni zokugcina ezinelayisensi esifundazweni sase-Illinois.
Yenkokhelo ephelele yamakhasi angama-522 Chofoza lapha
Ukuphathwa kwensangu akunamkhawulo, cishe i-ounce elilodwa lensangu lingabanjwa ngokusemthethweni ngumuntu omdala wase-Illinois - njengoba ukuwohloka kukhula futhi kudinga ukungezwa ndawonye, ​​ngaphandle kokukhula kwekhaya.
30 amagremu insangu
Amagremu ama-5 we-cannabis ukugxila
I-500 mg yemikhiqizo ye-cannabis ye-THC; noma
Izitshalo ezi-5 kubahlali abaqeqeshiwe base-Illinois
ingxenye yamanani njengezakhamizi zase-Illinois
alikho ikhaya elikhulela kubantu abangabahlali
Ukusetshenziswa Kwabantu Abadala Akushintshi I-Illinois Medical Marijuana
I-Illinois Marijuana Yezomthetho Ikhuthaza Ukulingana
The ezomthetho zisebenza nge-cannabis e-Illinois futhi ifuna ukulungisa ukungabi nabulungisa kwangaphambilini ngokwakha abangeneli abasha emakethe yensangu "yabafakizicelo bokulingana kwezenhlalo" Uhlelo lwemalimboleko yenzalo ephansi engamaRandi ayizigidi ezingama-20 luzophathwa nguMnyango Wezohwebo kanye Nethuba Lezomnotho (DCEO) kubafakizicelo abafanelekayo bezenhlalakahle.
Isicelo Sokulingana Komphakathi e-Illinois Cannabis Law
Umuntu ofaka isicelo sokulingana kwezenhlalo ungumhlali wase-Illinois ohlangabezana okungenani nale nqubo elandelayo:
Faka isicelo njengobunikazi nokulawulwa okungamaphesenti angama-51 ngumuntu oyedwa noma abaningi abahlale okungenani iminyaka emi-5 kule minyaka eyi-10 eyedlule enomthelela ongahlanganyeli.
Umfakisicelo onobunikazi okungenani kanye namaphesenti angama-51 oboshelwe umuntu oyedwa noma abaningi ababoshelwe, abatholwe benecala, noma abagwetshwe ukuthi babe yiwadi yenkantolo yentsha nganoma yiliphi icala elifanelekile ukucekelwa phansi kwalo mthetho noma ilungu lomndeni onomthelela
Njengamanje uhlala endaweni enomthelela ongatheni; noma
Uboshelwe, ulahlwe yicala lenkantolo yentsha nganoma yiliphi icala elifanelekile ukuba lichithwe ngaphansi kwalo mthetho noma ilungu lomndeni onomthelela.
Amaphuzu angama-25 kwangu-200 "abafakizicelo abasha" azosuselwa ku- "Social Equity Abafakizicelo.
Izicelo ezintsha ku-Illinois Cannabis Market
UMnyango wezoLimo uzothuthukisa - ngokwenziwa komthetho - ukubalwa kokuthola abafakizicelo abasha embonini yabantu abadala yokusebenzisa insangu ezikhungweni ezintsha zokulima, ezikhungweni zezempilo nakubalimi bezandla.
Izikolo zisekelwe olwazini oluvela emthethweni, olusezingeni lamaphoyinti angama-200. Amaphuzu angama-25 avela kubafakizicelo be-Social Equity, futhi amaphuzu angaphezulu ayi-12 amabhonasi kubafakizicelo abasha be-cannabis anganikezwa nge:
Izindlela zokusebenza kanye nezemisebenzi (2)
Isivumelwano sokuthula sabasebenzi (2)
Umbiko womphakathi wendawo / wendawo (2)
Uhlelo Lwezemvelo (2)
Umnikazi we-Illinois (2)
Uhlelo lokubandakanya umphakathi (2)
Ukulinganiselwa kubunikazi bebhizinisi leCannabis e-Illinois
Akekho umuntu noma inhlangano eyophatha noma iyiphi inzalo esemthethweni, elinganayo, noma enenzuzo ngokuqondile noma ngokungaqondile, ezikhungweni ezingaphezu kuka-3 zokulima.
Akekho umuntu noma inhlangano eyophatha noma iyiphi inzalo engokomthetho, elinganayo, noma enenzuzo ngokuqondile noma ngokungaqondile, yezinhlangano ezingaphezu kweyishumi.
Akukho layisense yokungenisa izikebhi izonikezwa noma yimuphi umuntu noma ibhizinisi elinenzalo engaphezu kwe-10% esikhungweni sokulimaNoma yiliphi ilayisense elinikezwa umakhi ngeke linikezwe noma yimuphi umuntu noma ibhizinisi elinenzalo engaphezu kwe-10% esikhungweni sokulima.
Akekho umuntu noma inhlangano eyophatha noma iyiphi inzuzo esemthethweni, elinganayo, ubunikazi, noma inzuzo ezuzisayo, ngokuqondile noma ngokungaqondile, yelayisense eyikhulu engaphezu kweyodwa yokuqamba izikebhe ngaphansi kwalesi sihloko.
Ukusungulwa kwesimo “somuntu ofaka isicelo sokulingana” selayisense
Umuntu ofaka isicelo sokulingana kwezenhlalo ungumhlali wase-Illinois ohlangabezana nenye yale mibandela elandelayo:
Umfakisicelo onobunikazi okungenani obunamaphesenti angama-51 ngumuntu oyedwa noma abaningi abahlale okungenani iminyaka emi-5 kule minyaka eyi-10 eyedlule enomthelela ongahlangani.
Umfakisicelo onobunikazi okungenani kanye namaphesenti angama-51 oboshelwe umuntu oyedwa noma abaningi ababoshelwe, abatholwe benecala, noma abagwetshwe ukuthi babe yiwadi yenkantolo yentsha nganoma yiliphi icala elifanelekile ukucekelwa phansi kwalo mthetho noma ilungu lomndeni onomthelela ;
Kwabafakizicelo abanabasebenzi okungenani abangama-10 besikhathi esigcwele, umenzi wesicelo onama-51% okungenani abasebenzi abakhona manje:
isifinyezo sabantu abadala base-Illinois somthetho omusha we-cannabis
Isicelo sokungena okusha emakethe yokusebenzisa insangu yabantu abadala yase-Illinois
Inqubo yokuthola amaphuzu (UMnyango wezoLimo uzothuthukisa inqubo efanayo ngenqubo yokubusa yezikhungo zokulima, amaprosesa kanye nabatshali bezandla.) Umthetho lo uqukethe inqubo yokufaka amagoli i-IDFPR ezosebenzisa ukubukeza izicelo.
Kuwo wonke amaphuzu angama-200, amaphuzu angama-25 aqokelwe ngqo abafakizicelo abafaneleka njengabafakizicelo bezokulingana kwezenhlalo.
I-IDFPR inganikela ngamaphoyinti ayi-12 wabenzi bezicelo abakhethe, kodwa kungadingeki, imizamo. Amaphuzu amabhonasi azonikezwa kuphela uma umnyango uthola inani elikhulu kakhulu lezicelo ezihlangabezana nenani eliphansi lamaphoyinti adingekayo.
UMnyango Wezezimali Nezezingcweti noMnyango Wezolimo uzokwehlisa amaphesenti angama-50 ezinhlawulo zesicelo sokubuyiselwa kwemali (kuze kufinyelele kwizicelo ezi-2) nanoma yiziphi izimali ezingabuyiselwa ezihlobene nokuthenga ilayisense lokusebenzisa ukusungulwa kwebhizinisi le-cannabis (kuze kube amalayisense amabili) uma abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo behlangabezana nemibandela ethile.
Ukunciphisa izindleko zangaphambili zamalayisense amasha
Abafakizicelo abathola ilayisensi yenhlangano enikezela ngemibandela ethile bazoba nezinsuku ezingama-180 kusukela osukwini lomklomelo lokuhlonza indawo ebonakalayo yezitolo ezithengisa izinto zenhlangano lapho abantu abasha abangenayo bevunyelwe emakethe. Lokhu kuzonciphisa izindleko ezihambisana nokungena embonini.
UKUFINYELELA ISIMEMO KWI-ILLINOIS NGOKUTHOLAKALA KOKUFINYELELA KANYE NOKUTHENGA
Inqubo elandelayo yenzelwe ukuqinisekisa imakethe elinganayo kunazo zonke ezweni.
Imvume yokusebenzisa imvume yabantu abadala yokuthola imvume yabanikazi bamalayisense e-cannabis yamanje
Umugqa wesikhathi welayisense
Abalimi be-cannabis bezokwelapha bangafaka isicelo selayisense kungakapheli izinsuku ezingama-60 ngosuku lokuqala ukusebenza kwalo mthetho.
Amalayisense azohanjiswa kubafakizicelo abafanele zingakapheli izinsuku ezingama-45.
Ama-cannabis medical dispensaries angafaka isicelo selayisense kungakapheli izinsuku ezingama-60 usuku lokuqala ukusebenza kwalo mthetho.
Amalayisense azohanjiswa kubafakizicelo abafanele zingakapheli izinsuku ezingama-14.
Ukuthengiswa kwe-cannabis yabantu abadala kuzoqala ngoJanuwari 1, 2020.
Lawa mabhizinisi angafaka isicelo selayisense lesibili endaweni entsha ngaphansi kwamapharamitha afanayo.
Izindleko zokuthola amalayisense amalayisense wokusebenzisa abadala
Imali yemvume engabuyiswa: $ 100,000
Imali yesikhwama sebhizinisi yokuthuthukisa amabhizinisi weCannabis: 5% yokuthengiswa okuphelele phakathi kukaJulayi 1, 2018 kuya kuJulayi 1, 2019 noma ama- $ 500,000, noma ngabe yikuphi okuncane.
Imali yemvume engabuyiswa: $ 30,000
Imali yesikhwama sebhizinisi yokuthuthukisa amabhizinisi weCannabis: 3% yokuthengiswa okuphelele phakathi kukaJulayi 1, 2018 kuya kuJulayi 1, 2019 noma ama- $ 100,000, noma ngabe yikuphi okuncane.
Imali yemvume engabuyiswa: 30,000
Imali yesikhwama sokuthuthukisa amabhizinisi weCannabis: $ 200,000
Abafakiwe abasha emakethe yokusebenzisa insangu yabantu abadala
Umugqa wesikhathi wokwanda kwebhizinisi laseNew York
UMnyango Wezezimali Nobuchwepheshe Bokulawulwa
Meyi 1, 2020: I-ejensi ithola amalayisense ezinhlangano ezifika ezikhathini ezingama-75 ezintsha
NgoJulayi 1, 2020: Le nhlangano igunyaza amalayisense angafika kwangama-40 kubahloli, kuze kufike amalayisense angama-40 abakhiqizi bezandla, namalayisense ezinhlangano zokuhambisa.
NgoDisemba 21, 2021: Le nhlangano iwonga amalayisense afinyelela kwabayi-110 ezinhlangano ezintsha zokuhambisa izabelo
NgoDisemba 21, 2021: Le nhlangano igunyaza amalayisense afinyelela kwabangu-60 abatshali bezandla, aze afinyelela ku-60 amalayisense okusebenza kwenqubo, namalayisense ezinhlangano zokuhambisa.
Izindleko zamalayisense zokungena okusha emakethe yase-Illinois cannabis
Imali yesicelo engabuyiswa engu- $ 5,000
Imali yelayisense $ 40,000
Imali yelayisense $ 10,000
Imali yelayisense $ 30,000
Ukungena KOMPHAKATHI OKUVUSELEKILE NGEMUVA KWEMFAZI NGEMIBHALO
Lesi siphakamiso sizosungula uhlelo olusha lwemali eyisibonelelo, uhlelo lweRusting Our Communities (ROC), ukutshala imali emiphakathini eye ihlupheke kakhulu ngenxa yezinqubomgomo zokubandlululwa kwezidakamizwa.
Ukubukwa kohlelo lwe-ROC
I-ICJIA izokhetha "Izindawo ze-ROC" noma izindawo lapho abenzi bezicelo bezokufanelekela ukufaka izicelo zoxhaso lukahulumeni ngeBhodi ye-ROC.
IBhodi le-ROC lizoba namalungu angaphezu kwama-22 bese liholwa nguRhuluneli, noma inceku yakhe, kanye ne-Attorney General, noma othandekayo wakhe.
Ibhodi ye-ROC izothuthukisa isicelo sesibonelelo, izicelo zokucela usizo ezivela ezindaweni ezifanele ze-ROC, isabalalise izibonelelo kulo lonke izwe, futhi ihlole futhi ihlaziye nezinhlelo ze-ROC.
Ibhodi ye-ROC izokwethula umbiko wonyaka eHhovisi Lombusi mayelana nenqubekelaphambili.
UKWELULA AMAREKHODI WAKWAKHANISI E-ILLINOIS
Lezi zenzo ezilandelayo zodwa ezifanele ukuchitha.
Isigaba 4 Ukuphamba (akukho emthethweni nganoma yimuphi umuntu ukuthi abe ne-cannabis ngamanani alandelayo)
a. <10g Ukwephulwa komthetho wobuntu
Anganikezwa ukuhlolwa bese amacala ekhishwa §10 (a)
b. 10-30g Class B iphutha ngalinye elingasho lutho
c. 30-100g Isigaba A Misdemeanor
d. 100-500g Isigaba 4 Felony iminyaka 1-3
Isigaba 5 Umakhi / Ukuthumela
(akukho emthethweni kunoma yimuphi umuntu azi, ukukhiqiza, ukuletha, noma ukuba ne-ngenhloso yokuletha noma ukukhiqiza insangu ngamanani alandelayo
a. <2.5g Class B iphutha ngalinye elingasho lutho
b. 2.5-10g Isigaba A Misdemeanor
c. 10-30g Isigaba 4 Felony
Izimila zesigaba 8 (akukho emthethweni kunoma yimuphi umuntu azi ukuthi angakhiqiza noma abe nesitshalo se-cannabis sativa ngaphandle uma egunyazwe ngezinhloso zokucwaninga)
a. <5 izitshalo Isigaba A Misdemeanor
b. Izitshalo eziyi-5-20 Isigaba 4 Felony
Inqubo yokuqedwa kobugebengu base-Illinois Cannabis
Lesi siphakamiso siveza inqubo esheshayo yokwengeza amarekhodi obugebengu babantu ababanjiwe, abatholakala benecala, abagadiwe, noma abatholakala benecala lokwephula umthetho weCannabis Control Act. Izinhloso zokuqala zalesi sigaba (4) ukukhipha amarekhodi ahlobene ne-cannabis, kanye (1) nokuqondisa inqubo.
Inqubo yokuqothula othomathikhi idinga okulandelayo:
UMnyango WezamaPhoyisa OMbuso kufanele ukhombe bonke abantu abanamarekhodi obugebengu okufanelekile ukuba adilizwe bese uzikhipha ngokuzenzakalelayo amarekhodi okwephulwa okuncane kungakapheli iminyaka emibili kusukela uMthetho uqalile.
Kungakapheli izinsuku ezingama-180 usuku lokuqalisa ukusebenza kwalesi senzo, uMnyango Wezamaphoyisa Wezwe kufanele wazise (a) amahhovisi omshushisi obhekene necala lokushushisa amacala, (b) izinhlaka zomthetho wendawo, kanye (c) nehhovisi lika-Illinois Attorney General elibonisa bonke abantu ukwephula okuncane okulungele ukuthunyelwa.
Kungakapheli izinsuku ezingama-180 ukuthi uMnyango uthole Amaphoyisa, amahhovisi oMnyango WezamaPhoyisa afanele afake incwadi ehlongozwayo yokuthi inkantolo ifune abantu abathweswe amacala afanele. Ihhovisi lommeli-jikelele lingafaka ifomu elihlongozwayo uma ngabe uMmeli woMbuso engazange.
Ezinsukwini ezingama-180 ngemuva kokuthola umyalo ohlongozwayo, inkantolo izobuyekeza lo myalelo ohlongozwayo bese iyalela ukuba kudluliswe amarekhodi asenkantolo nawomthetho ngaphandle kokuthi kutholakale ukuthi lelo cala alihlangabezani nencazelo yokwephulwa okuncane.
Inkantolo izonikeza amakhophi alo myalelo eMnyangweni Wamaphoyisa Esifundazwe, enhlanganweni ebosayo, ezinhlanganweni ezifanele zobulungiswa bobugebengu, kanye nalowo muntu irekhodi lakhe elichithile.
Inqubo yokuqothula okuzenzakalelayo ayisebenzi kubantu abanokuphulwa okungafanele kwe-Class 4 noma i-Class XNUMX ababehambisana namanye amacala ngaphandle kokuthola icala elifanelekile. Abantu abanale marekhodi, nabantu abakwezinye izimo, bangafaka enkantolo ngokwahlukana inkantolo ukuthi amarekhodi abo alahlwe.
IMITHETHO YOKUQESHA EMALUNGA NECANNABIS E-ILLINOIS
Akukho lutho kulesi siphakamiso oluvimbela abaqashi ukwamukela izinqubomgomo zokuqashwa ezifanele eziphathelene nokubhema, ukusetshenziswa, ukugcinwa noma ukusetshenziswa kwe-cannabis emsebenzini.
Akukho lutho kulesi siphakamiso oluvimbela abaqashi ukuthi baqondise umqashwa noma banqamule ukuqashwa komsebenzi ngokwephula imigomo yokuqashwa komqashi noma inqubomgomo yezidakamizwa yasemsebenzini.
UKUTHENGWA KOKUSETSHENZISWA KOKUSETSHENZISWA KWE-CanNABIS E-ILLINOIS
Zonke izintela zifakwa esikhwameni esisha seCannabis Regulation Fund
Intela yelungelo lokukhulisa
Ama-7% amarisidi amakhulu avela ekuthengisweni kwe-cannabis ngumlimi, umlimi wezandla, noma iprosesa enhlanganweni esabalalisa
Intela yomthengi weCannabis:
I-10% yentengo yokuthenga - i-Cannabis enezinga le-THC ngaphansi noma ngaphansi kwama-35%
I-20% yentengo yokuthenga - Yonke imikhiqizo ye-cannabis
I-25% yentengo yokuthenga - i-Cannabis enezinga le-THC ngaphezulu kuka-35%
Lezi zintela zizokwengezwa kukho konke okunye ukusebenza, ilungelo, noma ukukhokhiswa kwentela okukhokhiswa i-State of Illinois noma nganoma iyiphi inhlangano kamasipala noma ukwahlukaniswa kwezepolitiki.
Intela yomthengi kaMasipala:
Omasipala bangakhipha umthetho wokuthi umthengi akhokhe intela aze afike ku-3% ekhuphukeni ngo-0.25%
Counties ingabonisa umthengi ocela ukukhokha intela aze afike ku-0.5% ezindaweni ezifakiwe kukhuphuko lwe
Izindawo ezingafinyelelwanga zingahle zisebenzise intela yokuthenga yomthengi kuze kufike ku-3.5% ezikhuphukeni ze-0.25%
UKUHLAZIYELWA KOKUGCINWA KWESITESI KUSUKELA KULWAZI KWESAKHANI
UMnyango Wezezimali uzohlinzeka ngesilinganiso semali esisemthethweni se-FY20 ezinsukwini ezizayo.
Imali yentela izofakwa esikhwameni esisha seCannabis Regulation Fund
Ama-ejensi wombuso abhekele ukuphatha uhlelo lokusebenzisa i-cannabis wabantu abadala azothola izinsiza zokukhokhela izindleko zokuphatha kusuka kuzintela eziqoqwe yilolu hlelo.
Yonke imali esele izokwabiwa ngale ndlela elandelayo:
Ama-35% azodluliselwa kwi-General Revenue Fund,
Ama-25% azodluliselwa kwiSikhwama Sokubuyiselwa Kwemiphakathi Yethu ukuze siphinde sakhiwe kabusha,
Ama-20% azodluliselwa esikhwameni esizokweseka izinsiza zezempilo yezengqondo nezokusebenzisa kabi izidakamizwa
eminyangweni yezempilo yendawo,
I-10% izodluliselwa kwiSabelomali Sokuqiniswa Kwesabelomali ukuze ikhokhe imali esetshenzisiwe emuva kwezikweletu ezingakhokhelwanga,
Ama-8% azodluliselwa kwi-Illinois Law Enforcing Training and Standards Board ukwenza uhlelo lokuphasiswa komthetho, futhi
Ama-2% azodluliselwa kwi-Drug Treatment Fund ukuze axhase imfundo yomphakathi nokuqwashisa.
UKUHLAZIYELWA KWEMITHETHO YASEKHANISI YEKANSI
Umbusi uzokhetha Isikhulu Sokulawulwa Kwe-Cannabis Regulation Ozoba se-IDFPR. Lo muntu, nethimba lakhe, uzoba negunya lokwenza izincomo zomthetho nezokulawula eziphathelene nohlelo lokusebenzisa abantu abadala. Lo muntu uzobuye axhumanise imizamo phakathi kwezinhlangano zikahulumeni ezibandakanyeka ekuphatheni nasekukhokhiseni intela ukuthengiswa kwe-cannabis e-Illinois.
Unesibopho sokuphoqelela nokuqoqa izintela ezihambisana nokuthengisa ama-cannabis.
Inesibopho sokuthola ilayisense kanye nokwengamela izindawo zokutshala, abatshali bezandla, izinhlangano zokucubungula, nezinhlangano zokuhamba.
Unesibopho sokugunyaza ielebhu ezihlola ama-cannabis
Unesibopho sokuthola ilayisense kanye nokwengamela izinhlangano ezisabalalisa.
I-Illinois State Police
Unomthwalo wemfanelo wokwenza amasheke wasemuva kuwo wonke umuntu obandakanyeka emkhakheni we-cannabis onelayisense.
Unesibopho sokubukeza amasu wokuphepha azo zonke izinto ezinamalayisense.
Unesibopho sokubukeza yonke imininingwane egciniwe yomlando wobugebengu futhi sikhombe bonke abantu abanokuhlukumezeka okuncane abakufanelekela ukucekelwa phansi ngokuzenzekelayo.
UMnyango Wezempilo Yomphakathi
Inomthwalo wemfanelo wokwenza izincomo ezungeze izixwayiso zezempilo kanye nokwenza lula iKomidi Lokwelulekwa Kwezempilo Yabadala i-Cannabis.
UMnyango Wezohwebo kanye Namathuba Wezomnotho
Unomthwalo wemfanelo wokuphatha uhlelo lokubolekwa kwemali, uhlelo lwezimali zosizo, nosizo lobuchwepheshe kulabo abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo.
Umnyango Wezemisebenzi Yabantu
Ubophezelekile ukwenza izincomo ekomidini labeluleki bezempilo yomphakathi i-Adann Use Cannabis mayelana nokwelashwa ngezidakamizwa nokuvimbela.
Unomthwalo wemfanelo wokwenza kanye nokusabalalisa izinto zokufundisa zabathengi.
Unomthwalo wemfanelo wokuqamba izindawo ze-ROC esifundazweni sonke ezingase zifake isicelo sokuxhaswa ngemali ebhodini le-ROC ukuze kuphinde kwenziwe umphakathi.
IMPILO YOMPHAKATHI NOKUPHEPHA KWE-ILLINOIS CanNABIS
Amaphesenti amabili wemali engenayo eyenziwe ukuthengiswa kokusetshenziswa kwe-cannabis yabantu abadala izosekela imizamo yokubhekana nokusebenzisa kabi izidakamizwa nempilo yengqondo.
Imikhawulo Yokukhangisa Yamabhizinisi e-Cannabis
Akukho ukusungulwa kwebhizinisi le-cannabis okuyofanela ukubeka noma ukugcina, noma ukudala ukubekwa noma ukugcinwa, isikhangiso, se-cannabis noma umkhiqizo owenziwe nge-cannabis nganoma yiluphi uhlobo noma nganoma iyiphi indlela ephakathi:
Ngaphakathi kwamamitha ayi-1,000 21 azungeza ibanga lesikole, ibala lokudlala, isibhedlela, isikhungo sokunakekelwa kwempilo, isikhungo sokuzijabulisa noma isikhungo, isikhungo sokunakekela izingane, ipaki lomphakathi noma umtapo wezincwadi kawonkewonke, noma noma iyiphi i-arcade lapho ukwamukelwa kungagcini eminyakeni yobudala engama-XNUMX noma ngaphezulu;
Izimoto zokuhamba zomphakathi noma zokuhamba zomphakathi;
Endlini noma kumhlaba osetshenziswa ngumphakathi;
Okuqukethe imininingwane engamanga noma edukisayo, ekhuthaza ukusetshenziswa ngokweqile, okubonisa umuntu ongaphansi kweminyaka engama-21 ubudala ophuza insangu, kufaka isithombe seqabunga le-cannabis; noma
Kufaka noma isiphi isithombe esiklanyelwe noma esingahle sikhange izingane, kufaka phakathi ikhathuni, amathoyizi, izilwane, noma izingane, noma okunye okufana nezithombe, izinhlamvu, noma imishwana edume ukusetshenziselwa ukukhangisa ezinganeni, noma okunye ukulingisa kokufaka uswidi noma ukufaka ilebula, noma lokho kukhuthaza ukusetshenziswa kwe-cannabis.
Le mikhawulo ayisebenzi kwimiyalezo engeyona eyezentengiselwano.
Izidingo zokupakisha ze-Illinois Cannabis
Izexwayiso ezilandelayo zizosebenza kuyo yonke imikhiqizo ye-cannabis: “Lo mkhiqizo uqukethe i-cannabis futhi wenzelwe ukuthi usetshenziswe ngabantu abadala abangu-21 nangaphezulu. Ukusetshenziswa kwayo kungalimaza ukuqonda futhi kungahle kube ukwakheka komkhuba. Lo mkhiqizo akufanele usetshenziswe ngabesifazane abakhulelwe noma abancelisa ibele. Akukho emthethweni ukuthengisa noma ukuhlinzeka ngale nto komunye umuntu, futhi kungenzeka kungathuthwa ngaphandle kwesimo sase-Illinois. Akukho emthethweni ukusebenzisa imoto ngenkathi uphethwe yi-cannabis. Ukuba namandla noma ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo kungahle kube nezinhlawulo ezinkulu ezingokomthetho kwezinye izindawo nangaphansi komthetho wenhlangano. ”
Yonke insangu evuniwe eyenzelwe ukusatshalaliswa ebhizinisini le-cannabis kufanele ifakwe esitsheni esivalekile, sinelebuli.
Ukupakishwa kwanoma yimuphi umkhiqizo oqukethe i-cannabis kuzoba ukuvikela izingane futhi kungabi lula ngokuhambisana namazinga wamanje, kufaka namazinga weKhomishini Yokuphepha Komkhiqizo Wabathengi oboniswe yiPoison Prevention Act.
Ilebula yomkhiqizo we-cannabis ngamunye uzoqukatha, phakathi kwezinye izinto, "ukusetshenziswa ngosuku" kwelebula, inani le-cannabis eliqukethwe kumkhiqizo, kanye nohlu lokuqukethwe.
Yonke imikhiqizo ye-cannabis kumele ibe nezitatimende ezixwayisayo ezenzelwe abathengi, ezingabukeka futhi zibonakale kalula kumthengi ohlola iphakheji, okungenzeka ukuthi alimboziwe noma lifihliwe nganoma iyiphi indlela.
Ukupakisha akumele kube nemininingwane yokuthi:
Kungamanga noma kuyadukisa;
Kukhuthaza ukusetshenziswa ngokweqile;
Ibonisa umuntu ongaphansi kweminyaka engama-21 ubudala odla insangu;
Kufaka noma yisiphi isithombe esiklanyelwe noma esingahle sikhange izingane, kufaka phakathi ikhathuni, amathoyizi, izilwane, noma izingane, noma okunye okufana nezithombe, izinhlamvu, noma imishwana esetshenziselwa ukukhangisa ezinganeni, noma yikuphi ukufakwa noma ukufakwa ilebula kufana noma yimuphi umkhiqizo otholakalayo ukusetshenziswa njengeswidi elitholakala ngokuhweba, noma elikhuthaza ukusetshenziswa kwe-cannabis;
Kuqukethe noma yiluphi uphawu, ifulege, i-crest, ijazi lezingalo, noma okunye okungahle kudukise umthengi ukuthi akholelwe ukuthi umkhiqizo uvunyelwe, wenziwe noma wasetshenziswa yi-State of Illinois.
UKUKHULA EKHAYA LOKUKHANZA KWI-CannABIS E-ILLINOIS
Imizi yase-Illinois ivunyelwe ukuthi ikhule ibe yizitshalo ezinhlanu ze-cannabis ngaphansi kwezimo ezithile:
Umtshali ngumuntu oneminyaka engama-21 noma ngaphezulu,
Umhlwanyeli usendlini engumnikazi wendawo yokuhlala noma enemvume evela kumnikazi,
Umhlwanyeli ubekelwe umkhawulo ekukhuleni kwezitshalo ezi-5 noma ngaphansi,
Umlimi kufanele agcine insangu egumbini elivaliwe ngokuhlukile kude namalungu omndeni angaphansi kweminyaka engama-21, futhi
Umtshali wenqatshelwe ekukhuleni insangu ngokubuka komphakathi.
IMISEBENZI YOKUZIPHATHA YOKUSETSHENZISWA KOKUSETSHENZISWA KWE-CanNABIS e-ILLINOIS
Omasipala bangahle banikeze imithetho evimbela ukwakhiwa kwezindawo ezinabasebenzi emandleni abo.
Amayunithi kahulumeni wasekhaya kufanele amukele izinqumo 'zokuphuma' kungakapheli unyaka wokuqala wesimemezelo noma ancishiselwe ekwamukeleni amalungiselelo 'okuphuma' nge-referendum yendawo.
Omasipala bangase basebenzise imikhawulo efanelekile yokubekelwa indawo ephathelene nezikhungo zokulima ezinelayisense, abakhiqizi bezandla, izinhlangano zokucubungula, kanye nezindawo ezihanjiswa.
Sizokubona maduzane - ngokushesha uma ubhalisa.
Khumbula ukubhalisa. @ https://www.youtube.com/cannabislegalizationnews